သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> စက်ချုပ်အပ် -> လြယ္ကူဆွေးနွေးချက်အပ်ချုပ်အပ်နဖားကို
ကျနော်တို့ကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများမှာ Taiwan လြယ္ကူဆွေးနွေးချက်အပ်ချုပ်အပ်နဖားကို ထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူ။ တည်ငြိမ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် မူတည်. ထက်သာလွန်အရည်အချင်းကိုနှင့်ကောင်းမွန်သောပြီးနောက်-ရောင်းချဝန်ဆောင်မှုကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့သူများတစ်ဦးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေကြပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များနှင့်စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်သင်တို့အဘို့အ-on အချိန် delivery မှာကတိပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အတူနှစ်ရှည်စီးပွားရေးထူထောင်ခဲ့ကြပါပြီ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစံပြအတွက်စိတ်ဝင်စားပါက, အခမဲ့ဖြစ်ကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
ပုံစံ: TFX2 LR /TFX287 LR，TFX2 D /TFX287 D
size: 10/70 ~ 23/160
Equivalent Systems: 16X2NRTW, 16X2RTW, 34LR, 287L, 287LR, 376LR, 690LR
machine: Lock ကိုချုပ်စ​​က်
ဒါဟာသော့ခတ်ချုပ်စ​​က်ကိုအဘို့ဖြစ်၏။ LR ပွိုင့်နှင့်အတူဆေးထိုးအပ်က, သားရေအမျိုးအစားအားလုံးကိုများအတွက်သင့်လျော်ပါတယ်။ ဖိနပ်, အဝတ်သေတ္တာနှင့်အဝတ်စက်မှုလုပ်ငန်း၏ထုတ်လုပ်ခြင်း။ ညီမျှစနစ်များပါဝင်သည်: 16X2NRTW, 16X2RTW, 34LR, 287L, 287LR, 376LR, 690LR ။
TFX2 ဃ / TFX287: D
Equivalent Systems: 16X2 Tri, 16X226 Tri, 34D, 287D, 376D, 606D, 690D
: D ပွိုင့်နှင့်အတူအပ်နဖားကိုသော့ခတ်ချုပ်စ​​က်ကိုအဘို့ဖြစ်၏။ ဒါဟာ Voyager စက်တွေအတွက်အသုံးပြုကြောင်းပွိုင့်အပ်နဖားကိုဖြတ်တောက်ပါတယ်။ ဒါဟာပင်ပင်ပန်းပန်းခြောက်ကပ်သောသားရေသီချုပ်များအတွက်သင့်လျော်သည် ဖြစ်. , ထုထည်ယက်။ ညီမျှစနစ်များပါဝင်သည်: 16X2 Tri, 16X226 Tri, 34D, 287D, 376D, 606D, 690D ။